स्वास्थ्य विमा गर्नेलाई छैन औषधी – Sabaikoaawaj.com
स्वास्थ्य विमा गर्नेलाई छैन औषधी
सोमवार, माघ १५, २०७४ 8:55:08 PM	मा प्रकाशित
स्थानीय तहले बजेट नदिँदा जिल्लाभर औषधीको अभाव तनहँुमा स्वास्थ्य विमा गर्ने नागरिकलाई औषधीको अभाव भएको छ । विमा गरे
वापत निशुल्क रुमपा प्राप्त गर्न पाउने औषधि दमौली अस्पतालमा अभाव भएको हो । सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ देखी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य विमाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । पहिलो वर्ष कैलाली, बाग्लुङ्ग र इलाम जिल्लाबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा तनहँु सहित थप २५ जिल्लामा सुरु गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुने आर्थिक भारलाई कम गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । परिवारमा आधारित यो कार्यक्रममा पाँच जना सम्मको एउटा परिवारले वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर सदस्य बन्न सक्ने छन् । यो विमाको सदस्य बनेपछि एक वर्ष भित्रमा ५० हजार रुपैयाँ सम्मको उपचार र औषधीको पैसा तिर्नु पर्दैन । तर तनहँुमा स्वास्थ्य विमा गरेका नागरिकहरुले दमौली अस्पतालबाट पाउनु पर्ने निशुल्क औषधीहरु औषधीको अभावको कारण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । दमौली अस्पतालको फार्मेसीमा औषधीको अभाव भएको कारण निशुल्क पाउनुपर्ने औषधी नागरिकले पाउन नसकेका छैनन् । एक सेवा ग्राहीले आफुले स्वास्थ्य विमा गरेपनि अस्पतालको फार्मेसीबाट औषधी नपाएको बताए ।
उनले उक्त औषधी बाहिर नीजि औषधी पसलबाट खरिद गर्नु परेको गुनासो गरे । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा दमौली अस्पतालका प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझीले अस्पतालको फार्मेसीमा औषधीको अभाव भएको कारण सबै नागरिकलाई निशुल्क औषधी दिन नसकिएको स्विकार गरे । विगतमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले नै औषधीको टेन्डर गरेर औषधी खरिद गर्ने व्यवस्था भएपनि यस बर्ष सबै बजेट स्थानीय तहमा गएको र व्यास नगरपालिका बाट औषधी खरिदको लागि पर्याप्त बजेट नपाएको कारण औषधी पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । धेरै अनुरोध पछि केही दिन अघि व्यास नपाले औषधी खरिदको लागि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको भन्दै डा. रायमाझीले उक्त औषधी एक सातामै सकिएको बताए । दमौली अस्पताल लगायत जिल्लाका प्राय सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा अहिलेनिशुल्क वितरण गरिने र अत्यावश्यक औषधीको अभाव भएको डा. रायमाझीले बताए । स्थानीय तहहरुले पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन नगर्दा औषधीको अभाव भएको उनको भनाई छ । दमौली अस्पतालमा दैनिक २० जना भन्दा बढि स्वास्थ्य विमा गर्ने सेवा ग्राही उपचारको लागि आउने गर्छन् ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, माघ १५, २०७४ 8:55:08 PM